नेपालमै घट्यो यस्तो अनौठो घटना : विवाह मण्डपबाटै दुलाहा दुलही पक्राउ ! यस्तो छ कारण
- नेपाली सन्देश शनिबार, बैशाख १५, २०७५ , 5K जनाले हेर्नुभयो
बालविवाह गर्न लागेको सूचनाका आधारमा प्रहरीले दुलाहा दुलहीलाई विवाह मण्डपबाटै पक्राउ गरेको थियो । केटाकेटीबीच केही दिनअघि प्रेम विवाह भएको थियो । सानीभेरी गाउँपालिका वडा नं १० अर्माका १८ वर्षीय बालक र सानीभेरी वडा नं ७ जैधुनेकी १७ वर्षीया बालिकाबीच बालविवाह हुँदै गर्दा प्रहरीले पक्राउ गरेको सिम्ली प्रहरी चौकीका प्रमुख गगनसिंह ठकुरीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार केटीका अभिभावक शिक्षक हुनुहुन्छ । शिक्षित परिवारबाटै यसरी बालविवाह हुनु दुखद भएको उहाँको भनाइ छ । माइती घरमा विवाह अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा प्रहरी त्यहाँ पुगेको थियो ।
प्रहरीले दुलाहा दुलहीलाई पक्राउ गरेपछि विवाह रोकिएको छ । विवाह रोकी केटाकेटीलाई अभिभावकको जिम्मा लगाइने प्रहरीको भनाइ छ ।
अशिक्षितभन्दा शिक्षित परिवारबाटै बालविवाह हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ । सरकारले केटाकेटी दुवै २० वर्ष नपुगी गरिने विवाहलाई बालविवाह भनेको छ । बालविवाह भएका प्रकृति हेरी छ महिना वा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
एक अनपढ शिक्षक, जसले १७ वर्ष विद्यार्थीलाई पढाए,जीवनको यथार्थ बुझाउने सत्य कथा पढ्नुहोस
जोन कोरकोरन सन् १९४०–५० को दशकमा मेक्सिकोमा हुर्किएका हुन् । आमा–बुवाका ६ सन्तानमध्ये उनीमात्र अनपढ थिए तर यो रहस्य परिवारका कसैले पनि थाहा पाएनन् । यतिमात्र होइन, उनले १७ वर्षसम्म शिक्षकका रुपमा कामसमेत गरे । तर कसरी ?
जोन कोरकोरनकै शब्दमा उनको कहानी
बाल्यकालमा मलाई मेरा आमाबुवाले म एक ‘विजेता’ हुँ भन्नु हुन्थ्यो । जीवनको ६ वर्षसम्म म यो कुरामा विश्वास पनि गर्थेँ । म अलि ढिलो बोल्न थालेँ र ठूलो आशाका साथ म आफ्ना दिदीहरुजस्तै पढ्नका लागि स्कूल जान थालेँ । पहिला सबैकुरा ठिकै थियो किनकि धेरै कुरा गर्नु पर्दैनथ्यो । स्कूल गएको अर्को वर्ष हामीले पढ्न लेख्न सिक्नु पर्ने थियो । तर मेरो लागि पढ्नु काम यस्तो थियो कि मेरो साुमन्ने चिनियाँ भाषाको कुनै अखबार पल्टाएजस्तै हुन्थ्यो किनकि मलाई पढ्न आउँदैनथ्यो ।
६–७ वर्षको एउटा बालकका लागि यस्तो समस्या बुझ्नु सजिलो कुरा थिएन । मलाई याद छ, म राति सुत्नु अघि भगवानसँग प्रार्थना गर्दथेँ कि हे भगवान ! बिहान उठ्दा मलाई पढ्न आओस् । कहिले काहीँ त म राति पनि उठेर किताब खोलेर हेर्थेँ, कुनै चमत्कारबाट मलाई पढ्न आउँछ कि भनेर ।
म ‘नालायक विद्यार्थी’ को लाइनमा बस्न थालेँ । उनीहरु पनि मजस्तै पढ्न लेख्न जान्दैनथे । मलाई थाहा छैन, म त्यहाँ कसरी पुगेँ । कसरी बाहिर निस्कने भन्ने पनि मलाई थाहा थिएन । के सोध्ने भन्ने पनि मलाई थाहा थिएन । हाम्रा शिक्षकहरु भने यसलाई ‘नालायक विद्यार्थीको लाइन’ भन्दैनथे । तर तर अरु विद्यार्थीहरु यो लाइनमा हुने नालायक नै भएकाले हामीलाई नालायक नैै मान्दथे । अभिभावक–शिक्षक बैठकमा मेरा शिक्षकहरुले मेरा आमाबुवालाई भन्ने गर्दथे– यो निकै तेज छ, यसले सिक्छ ।
हरेक वर्ष शिक्षकले यस्तै भन्थे र मलाई माथिल्लो क्लासमा भर्ना गर्दै गए । तर म बुझ्न सकिरहेको थिइनँ । पाँच क्लासमा पुगेपछि मैले पढ्नेलेख्ने आशा नै त्यागेँ । म दैनिक बिहानै उठेर तयार हुन्थेँ, कुनै युद्धमा गए झैं स्कूल जान्थेँ । मलाई कक्षाकोठामा बस्न मन लाग्दैनथ्यो । सात कक्षामा पुगेपछि म दिनभर प्रिन्सिपलकै कक्षमा बस्ने गर्दथेँ । म कक्षामा झगडा गर्ने, विद्रोह गर्ने, जोकर बन्ने, अरुलाई डिस्टर्ब गर्ने भएपछि कक्षाबाट निकालिएको थिएँ । तर भित्र म यस्तो थिइनँ, म यस्तो बन्न चाहिरहेको थिइनँ । तर राम्रो बन्न पनि सकिरहेको थिइनँ ।
आठ कक्षामा पुग्दानपुग्दै म आफू र आफ्नो परिवारलाई लज्जित गर्दागर्दा थाकिसकेको थिएँ । अब सबै राम्रो गर्छु भनेर मैले फैसला लिएँ । म खेलाडी बन्न चाहन्थेँ । मभित्र खेलाडीको प्रतिभा थियो । गणितमा म राम्रै थिएँ । किनकि स्कुल सुरु हुनु अघि नै म पैसा गन्न सक्थेँ । म आफ्नो नाम लेख्न सक्थेँ । केही अरु शब्द पनि लेख्थेँ तर वाक्य पुरा गर्न सक्दैनथेँ । म माद्यामिक स्तरमा थिएँ । तर दुई–तीन कक्षाको विद्यार्थीको स्तरमा मात्र पढ्नलेख्न सक्थेँ । मैले कहिल्यै कसैलाई भनिनँ कि मलाई पढ्न आउँदैन ।
परीक्षामा म कसैको उत्तरपुस्तिकामा हेथेँ या अरु कसैलाई आफ्नो उत्तर पुस्तिकामा लेख्न लगाउँथेँ । तर जब म खेलकुदमा छात्रवृत्ति पाएर कलेजमा भर्ना हुन गएँ, मेरो बाटो त्यति सहज थिएन । पुराना प्रश्न पत्र पाइन्थ्यो, परीक्षाको चुनौती सामना गर्ने यो पनि एक तरिका थियो । कुनै यस्तो साथीको कक्षामा म जान्थेँ, जसले मलाई सहयोग गरोस् । केही यस्ता प्रोफेसर थिए, जसले प्रत्येक वर्ष एउटै प्रश्नपत्र प्रयोग गर्दथे ।
एक पटक एकजना प्रोफेसले बोर्डमा ४ प्रश्न लेखिदिए । म कक्षामा पछाडि बसेको थिएँ, झ्यालको छेउ । मसँग निलो उत्तर पुस्तिका थियो र मैले चारैवटा प्रश्न लेखेँ । मलाई ती प्रश्नको जवाफ थाहा थिएन । मैले पहिला नै एक साथीलाई झ्याल बाहिर राखेको थिएँ । ऊ स्कुलको तेज विद्यार्थी थियो । मैले झ्यालबाट उसलाई आफ्नो उत्तर पुस्तिका दिएँ ता कि उसले मेरो लागि उत्तर लेखिदियोस् । मैले आफ्नो शर्टमा एउटा अर्को उत्तरपुस्तिका लुकाएको थिएँ । मैले त्यसलाई बाहिर निकाले र लेखिरहेको नाटक गर्न थालेँ । म उत्तीर्ण हुनका लागि पागल भइरहेको थिएँ । त्यसपछि एकपटक मैले राति प्रोफेसरको कार्यालयमा गएर प्रश्नपत्र चोरी गरेँ । चोरी गरेपछि एकपटक म निकै खुशी भएँ, म कति चलाख छु भनेर । यति कठिन काम गरेँ तर घर आएर म रुन थालेँ । मैले किन कसैको मद्दत मागिनँ ? किनकि मलाई कसैले मद्दत गर्न सक्दैनथ्यो भन्ने लाग्थ्यो । कसैले मलाई बढ्न सिकाउन सक्दैनथ्यो ।
मेरा शिक्षकले, मेरा आमाबुवाले मलाई यही कुरा भनेका थिए कि डिग्री हासिल गरेपछि राम्रो जागिर पाइन्छ । मैले पनि यही कुरामा विश्वास गरेँ । मेरो दिमागमा केवल डिग्री कै कागज हासिल गर्ने कुरा थियो । डिग्री पनि पाएँ । अध्यापकहरुको कमी थियो । त्यसैले मलाई अध्यापकको जागिरका लागि प्रस्ताव आयो । यो अनौठो पनि थियो, म जुन मुस्किलबाट निस्किएँ, अब फेरि त्यहीँगइरहेको थिएँ । मैले यो जागिर किन गरेँ ? स्कुल र कलेजमा म उम्किएँ, त्यसैले शिक्षकको जागिरमा आफ्नो वास्तविकता लुकाउनु एउटा विकल्प थियो । कसलाई शंका हुन्छ र एउटा शिक्षकलाई पढ्न आउँदैन भनेर ! मैले धेरै कुरा पढाएँ । म खेल सिकाउँथेँ, सोशल साइन्सको विषय पढाउँथेँ । मैले टाइपिङ पनि सिकाएँ । म एक मिनेटमा ६५ शब्द टाइप गर्थेँ तर मलाई नै थाहा हुँदैनथ्यो कि मैले के टाइप गरिरहेको छु । मैले ब्ल्याकबोर्डमा कहिल्यै लेखिनँ । हामी कक्षामै धेरै फिल्म हेर्थ्यौं र चर्चा गर्थ्यौं ।
यसबीच मै मेरो विवाह भयो । मैले विवाह अघि नै आफ्नी पत्नीलाई सत्य कुरा भन्ने सोचेँ । मैले उनलाई आफूलाई पढ्न नआउने बताएँ । तर मलाई किताबमा रुची छैन भन्ने अर्थमा उनले बुझिन् । विवाह भयो र हाम्रो छोरी जन्मिइन् । एक दिन यो रहस्य मेरो पत्नीसामू खुल्यो, जब म आफ्नी तीन वर्षीय छोरीलाई किताब पढेर कथा सुनाइरहेको थिएँ । म आफैं कथा बनाएर भनिरहेको थिएँ किनकि मलाई किताबको कथा पढ्नै आउँदैनथ्यो । जब मेरी पत्नीले सुनिन्, उनले वास्तविकता थाहा पाइन् । तर उनले मलाई केही भनिनन् । उनले मेरो मद्दत नै गरिन् ।
मलाई म नालायक लाग्थ्यो, झुटो लाग्थ्यो । म धोका दिइरहेको थिएँ । म आफ्नो विद्यार्थीलाई सही मार्गमा हिँड्न सिकाइरहेको थिएँ तर त्यही कक्षामा सबैभन्दा झुटो म नै थिएँ ।
मैले सन् १९६१ देखि १९७८ सम्म स्कुलमा पढाएँ । जागिर छाडेको ८ वर्षपछि मेरो जीवनमा परिवर्तन आयो । त्यतिबेला म ४७ वर्षको थिएँ । मैले बारबरा बुशलाई टिभीमा देखेँ । उनले वयस्कका लागि शिक्षाका बारेमा बोलिरहेकी थिइन् । मैले कसैलाई पहिलो पटक यसबारे बोलिरहेको सुनेको थिएँ । मलाई लाग्थ्यो ममात्र यस प्रकारको समस्याको शिकार हुँ । एक दिन स्टोरमा दुई महिला आफ्ना वयस्क दाजुभाइको पढाइका बारेमा कुरा गरिरहेका थिए, जो लाइब्रेरीमा पढ्न जान्थे । उनीहरु पढ्न सिकिरहेका छन् । एक शुक्रबार साँझ म पनि लाइब्रेरी पुगेँ, साक्षरता कार्यक्रमको निर्देशकसँग भेटेँ । मैले उनलाई आफूलाई पढ्न नआउने कुरा बताएँ । मेरो जीवनमा उनी दोस्रो मानिस थिए, जसलाई आफ्नो यो रहस्य बताएको थिएँ ।
मैले त्यहाँ ६५ वर्षीय एक प्रशिक्षक पाएँ । उनी शिक्षक थिएनन् तर उनलाई पढ्न राम्रो लाग्थ्यो । सुरुमा उनले मलाई आफ्नो मनमा लागेको कुरा लेख्न भनेँ । मैले सबैभन्दा पहिला एक कविता लेखेँ, जो म महसुस गर्दथेँ । कविता लेख्न यसर्थ सहज थियो कि त्यसमा पुरा वाक्य लेख्नु पर्दैनथ्यो ।
मेरो प्रशिक्षकले मलाई छैठौं कक्षाको स्तरसम्म पढ्न सिकाए । तर मलाई साक्षर महसुस गर्न सात वर्ष लाग्यो । जब मैले पढ्न सिकेँ, म खुब रोएँ । सिक्ने यो यात्रामा धेरै हतास भएँ, पीडा भयो, मेरो आत्मामा बनेको ठूलो खाडल मैले भरेको थिएँ । ४८ वर्षसम्म जस्तो अँध्यारोमा थिएँ, आखिर त्यो ‘भूत’बाट मैले छुट्कारा पाएँ ।